ဖိုးသော် နှစ်တန်းတက်တဲ့ နှစ်မှာ သူ့အဖေ အလုပ်တာဝန်အရ နယ်ပြောင်းရတယ်။ ဝေးဝေးတော့မဟုတ်။ နွားထိုးကြီး ဆိုတဲ့ တောမြို့ကလေး ဆီကိုပါ။ ဝေးဝေးမဟုတ်ဖူး ဆိုတာက ဒီလို။ မြင်းခြံကနေ ပြောင်းရတာကိုး။ မြင်းခြံနဲ့ နွားထိုးကြီးက မိုင်နှစ်ဆယ် လောက်ပဲ ရှိတာ။ ဖိုးသော်အမေကတော့ ဒီလိုပြောတယ်။ "နွားထိုးကြီးက မြင်းခြံထက် တောကျတယ် ဆိုပေမယ့် မန္တလေးကို သွားမယ်ဆိုရင် မိုင်ရှစ်ဆယ်ပဲ ရှိတော့တာ"။ ဟိုတုန်းကထဲက မန္တလေးမှာ နေနေတဲ့ အဖွားကို တွေ့ဖို့ နှစ်လ တခေါက် ဆိုသလို သွားနေရတာတော့ ဖိုးသော်အမေ ပြောတာ လည်း ဟုတ်တုတ်တုတ်။ ထားပါလေ။ မန္တလေးနဲ့ နီးတာ ဝေးတာကို ပြောချင်လို့ မဟုတ်ပါဘူး။
နွားထိုးကြီးရောက်တော့ ဖိုးသော်အမေက အိမ်မှာ ထမင်းဟင်းချက်ဖို့၊ ကလေးတွေရဲ့ ဝေယျာဝစ္စလုပ်ပေးဖို့ လူလိုတယ် ဆိုပြီး လူငှားလိုက်ရှာတယ်။ ဖိုးသော်တို့မှာ မောင်နှမအားလုံး လေးယောက်ဆိုတော့ သူတို့အမေ လည်း တနေ့တနေ့ ဈေးဝယ် ထွက်ရ၊ ချက်ရပြုတ်ရတဲ့ တာဝန် စတာတွေနဲ့ ဂျင်ဂျီလည်နေတာကိုး။ ဒါတောင် အဝတ်လျှော်ရ၊ မီးပူထိုးရ၊ အိမ်သန့်ရှင်းရေး လုပ်ရတာတွေ မပါသေးဖူး။ အဲတာနဲ့ နောက်ဆုံးတော့ တောင်သာ နယ်ဖက်က ထမင်းချက်ဖို့ အမျိုးသမီး တယောက် ဖိုးသော်တို့ အိမ်ကို ရောက်လာတယ်။ သူ့နာမည်က အမှုံတဲ့။ အမှုံရဲ့ အသက်က သုံးဆယ်လောက်တော့ ရှိပြီလို့ထင်တယ်။ အညာသူပီပီ အမှုံဟာ အသားညိုတယ်။ အရပ်ကလည်း ခပ်ပြတ်ပြတ်ပဲ။ တခုရှိတာက အမှုံရဲ့ ခြေထောက်တဖက်ဟာ သိပ်မသန်ဖူး။ ခြေကျင်းဝတ်မှာ လိမ်တိန်တိန် ဖြစ်နေတယ်။ ဒါကြောင့် လမ်းလျှောက်ရင် ထော့နင်းထော့နင်း ဖြစ်နေတာပေါ့။ "အဲတာ သူငယ်ငယ်တုန်းက ပိုလီယိုဖြစ်လို့ ငါ့သားရဲ့" ဆိုပြီး အမေက ရှင်းပြတယ်။ "ပိုလီယိုဆိုတာ ဘာတုန်းအမေ"။ နှစ်တန်းကျောင်းသားက ပိုလီယိုဆိုတာ ဘယ်လိုလုပ်နားလည်မလဲ။ အဲတော့ အမေက "ပိုလီယိုဆိုတာ အရိုး ပျော့ရောဂါကို ပြောတာကွဲ့"လို့ ခပ်လွယ်လွယ် ဘာသာပြန်ပေးလိုက်တယ်။
နောက်ထပ် တခုလည်း ရှိသေးတယ်။ အဲတာက ဘာတုန်းဆိုတော့ အမှုံအပျိုပေါက်လောက်က တောင်သာမြို့ကို လူကြီး တွေနဲ့ ဈေးဝယ်ဖို့ တောက တက်လာရင်း ကုန်ကားခြင်း တိုက်မိရာက သွားတွေ ကျိုးသွားခဲ့တယ်။ သွားပြန်စိုက်ဖို့ ပိုက်ဆံ မရှိတာလား ဘာလားတော့ မသိဖူး အမှုံက အံကပ်ကြီးတပ်ထားတယ်။ ဒီအတိုင်း ကြည့် လို့ကတော့ အံကပ် တပ်ထားမှန်း မသိသာပါဖူး။ ဒါပေမယ့် အမှုံအိပ်ရင် အံကပ်ကြီးကို ဖြုတ်ပြီး ရေဖန်ခွက်ထဲမှာ ထည့်ထားတယ်။ အဲတာကြီးကို မြင်တိုင်း ဖိုးသော်ဖြင့် အသဲယားလွန်းလို့။
နှစ်တန်းကျောင်းသား ဖိုးသော် စာအော်ကျက်တိုင်း အမှုံကနားထောင် နေတတ်တယ်။ ပြီးရင် ဖိုးသော်ကို တချက်ချက် ဆရာဝင်လုပ်တတ် ပြန်တယ်။ ကမ္ဘာကြီးသည် လိမ္မော်သီးကဲ့သို့ လုံးဝန်းသော သဏ္ဌာန်ရှိသည်လို့ ဖိုးသော်က အော်ဖတ် တော့ အမှုံက "ဟဲ့ ပေါက်ပေါက်ရှာရှာ ကမ္ဘာဆိုတာ အပြားကြီး။ လုံးနေရင် လူတွေ ချောက်ထဲကျသလို လိမ့်ကျကုန်မှာပေါ့" ဆိုပြီး ဆရာဝင်လုပ်တာမျိုး။ နောက် သူ့ထင်မြင်ချက် တွေလည်း ပေးသေးတယ်။ ဥပမာ ပြောရရင် "ဇွန်ပန်းရုံအနီး နွံထဲတွင် လှည်းဘီး ကျွံနေသည်။ ကူ၍တွန်းပေးကြပါ" လို့ ဖိုးသော်က အော်ဖတ်တာကို အမှုံက "ငါတို့များတော့ တသက်လုံး ဇွန်ပန်းကို ကြိုက်ကိုမကြိုက်တာ။ စံပယ်ပန်းပဲ" ဆိုပြီး မှတ်ချက် ဝင်ပေးတာမျိုးပေါ့။ ဒါပေမယ့် တကယ်တန်း ပြောရရင် အမှုံဟာ စာမဖတ်တတ်ဖူး။ စာမတတ်ပေမယ့် ဖိုးသော် စာအော်ကျက်တိုင်း ဆရာဝင်မလုပ်တဲ့ အခါရယ်လို့ တခါမှမရှိဖူး။ ဘယ်ကျမှ အမှုံစာမတတ်မှန်း သိတုန်းဆိုတော့ တခါသားမတော့ မြို့ထဲက စာအုပ်ဆိုင်က ဖိုးသော် ကာတွန်း တအုပ် ဝယ်လာမှသိရတာ။ ကာတွန်း ဇတ်လိုက်က မောင်ကမBာတဲ့။ စုံထောက်ပေါ့။ လူဆိုးဂိုဏ်း ခေါင်းဆောင်က ဖူးမန်းချူး။
အဲဒီ ကာတွန်းစာအုပ်ကို အမှုံမြင်တော့ "ဟဲ့ ဖိုးသော် အဲဒီ ကာတွန်းက ဘာတဲ့တုန်း"လို့စပ်စုတယ်။ "စုံထောက် မောင်ကမ္ဘာလေ။ ကျနော်ပြီးရင် အမှုံယူဖတ်လို့ ရတယ်"။ "ငဒို့က ဘုန်းကြီးသင်တဲ့ စာတွေရပေမယ့် ကာတွန်းတွေ ဘာတွေတော့ မဖတ်တတ်ပါဖူးကွယ်" ဆိုပြီး သူစာမတတ်တာနဲ့ ပတ်သတ်လို့ တဝက်လိမ် တဝက်ဝန်ခံ လုပ်သေးတယ်။ လုံးလုံးစာမတတ်ဖူးလို့တော့ ထုတ်မပြောဖူး။ နောက်ပိုင်းတော့ အမှုံစာမတတ်မှန်း ဖိုးသော် သိသွားတယ်။ ဘာဖြစ်လို့တုန်းဆိုတော့ မောင်ကမ္ဘာကာတွန်းကို ဖတ်တော့ စာဖတ်သလို ဖိုးသော်က အော်ဖတ်တာမှ မဟုတ်တာ။ အရုပ်ကိုကြည့်ပြီး စိတ်ထဲက ဖတ်တာကိုး။ အဲတော့ အမှုံက "ဖိုးသော်ရဲ့ ငဒို့လည်း ကြားရအောင် အော်ဖတ်ပါ့လား" ဆိုပြီး ပြောလာမှ ရိပ်မိတော့တာကိုး။ အဲဒီတော့ ဖိုးသော်က အမှုံလည်း ဇာတ်လမ်းသိရအောင် အသံထွက်ပြီး ဖတ်ပြပါတယ်။ စုံထောက်ဇာတ်လမ်း ဆိုတော့ ပြေးလွှားတာတွေ၊ သတ်ပုတ်တာတွေ၊ သေနတ်ပစ်ခန်းတွေ ပါတော့ အမှုံ မကြိုက်ပါဖူး။ ဒါပေမယ့် ဇာတ်လမ်းကိုတော့ အမှုံက အလွတ် မှတ်ထားတယ်။ ပြီးတော့မှ ဘာလုပ်တုန်းဆိုတော့ ကျောင်းမနေရသေးတဲ့ ဖိုးသော် နှမလေးကို အမှုံက သူထင်တာတွေ ဇတ်လမ်းထဲ ထပ်ဖြည့်၊ သူမကြိုက်တဲ့ အပိုင်းတွေကို ဖြုတ်ပစ်ရင်း ပုံပြော သလို ပြောပြရှာတယ်။ ဖိုးသော် စာအော်ကျက်တိုင်း အမှုံက ဝင်ဝင်ပြီး ဆရာလုပ်နေဆဲ ဆိုပေမယ့် မောင်ကမ္ဘာ ကာတွန်းနဲ့ ပတ်သက် ရင်တော့ ဆရာမလုပ်တော့ဖူး။ မောင်ကမ္ဘာ ကဏ္ဍကိုတော့ ဖိုးသော်ကို အပိုင်စားပေးလိုက်တဲ့ သဘောမျိုးလို့ ဆိုရမလားပဲ။ မောင်ကမ္ဘာ ကျွမ်းကျင်သူပေါ့လေ။
အမှုံက ဆရာလုပ်တယ် ဆိုပေမယ့် သူတို့ မောင်နှမ လေးယောက်ထဲမှာ ဖိုးသော်ကို ဦးစားအပေးဆုံး။ ထမင်း စားရင် ဖိုးသော် ပန်းကန်ထဲကို ဟင်းတုံးပိုထဲ့ပေးလေ့ ရှိတယ်။ အဲတာကြောင့် ဖိုးသော်အကိုက အမှုံ့ကို မျက်နှာလိုက်တယ် ဆိုပြီး အမြဲတန်း ကွန်ပလိန်း တက်တယ်။ ဒါပဲလားဆိုတော့ မကသေးဖူး။ မုန့်ကြွေးပြီ ဆိုရင်လည်း သူ့အကို အလစ်မှာ ဖိုးသော်ကို ပိုပိုသာသာ ပေးပြန်သေးတယ်။ မုန့်တွေကလည်း ဖိုးသော် အကြိုက်တွေချည်းပဲ။ နွားနို့ထန်းလျှက်တို့၊ မုန့်ကြက်ဥတို့၊ မုန့်သြဇာတို့ စသဖြင့်ပေါ့လေ။ ဒါကြောင့် အမှုံ ဆရာလုပ်လေ့ရှိတာကို ဖိုးသော်ကလည်း ဘယ်လိုမှ မအောက်မေ့ပါဖူး။ နောက်တချက်က လူကြီးဆိုတာ ကလေးတွေကို ဆရာလုပ်တာ ထုံးစံပဲ ထင်ပါရဲ့လို့ ဖိုးသော်က မြင်နေတာလည်း ပါတာပေါ့။ အဲတာတွေအပြင် ကျောင်းပိတ်ရက် မနက်ပိုင်းတွေမှာ အမှုံဈေးဝယ်ထွက်ရင် ဖိုးသော်က ခြင်းဆွဲပြီး လိုက်သွားလေ့ရှိတယ်။ ဖိုးသော် အကိုကတော့ ဈေးဝယ်တာ မိန်းမတွေလုပ်တာကွ ဒို့နဲ့မဆိုင်ဖူးဆိုပြီး ဘယ်တော့မှမလိုက်ဘူး။ ဖိုးသော် ဈေးဝယ်လိုက်တာက မသိသူကျော်သွား သိသူဖော်စားဆိုတဲ့ စကားအတိုင်း လုပ်နေတာ။ "အမှုံ ဈေးဝယ်ပြီးရင် ကျနော် မုံတီလက်သုပ် စားမယ်နော်"။ "အေး အေး ဒီအာလူးလေးတွေ ရွေးပြီးရင် သွားစားတာပေါ့။ ခဏလေး စောင့်"။ တချို့ရက်တွေကြတော့ "အမှုံ ဦးလေးသောင်း ဆိုင်မှာ စမူဆာသုပ်စားမယ်နော်"။ "အေးပါဆို ဈေးဝယ်တာလေး ပြီးအောင် ဝယ်ပါရစေဦးဟဲ့"။
မောင်ကမ္ဘာ ကာတွန်းထွက်တိုင်း ဖိုးသော်က ဝယ်ပြီးဖတ်တယ်။ ဒါကိုတော့ အလွတ်မခံဖူး။ အဲဒီတုန်းက စာအုပ်အငှားဆိုင် ဆိုတာကလည်း မပေါ်သေးဖူးမို့လား ဒါကြောင့် အပိုင်ဝယ်ရတာပေါ့။ မောင်ကမ္ဘာအသစ် ထွက်တိုင်း ဖိုးသော် မပျက် မကွက် လုပ်ရတာကတော့ အမှုံ့ကို အသံထွက်ပြီး ဖတ်ပြရတာပါပဲ။ တယောက် နဲ့တယောက် အပြန်အလှန် အကျိုးပြုနေ ကြတယ် ဆိုရင်လည်း မမှားဖူးပေါ့။
တရက်ကြတော့ ဖိုးသော် မိဘတွေ ဧည့်သည်တွေနဲ့ စကားပြောနေကြတယ်။ ဖိုးသော် အဖေက "ကိုင်းဗျာ လူမရောက် မြင့်မိုရ်တောင် ဆိုပေမယ့် အခု လပေါ်ကိုတော့ ဒုံးပျံတွေစီးပြီး လူရောက်ကုန်ပြီ။ ရှေ့ရှောက်တော့ အမေရိကန်တွေက အာကာသကို ဦးဆောင်တော့မယ် ထင်ပါရဲ့"။ ဖိုးသော် အမေကလည်း "လပေါ် အထိ လူရောက်ပြီဆိုတော့ နောင်ကြရင် တခြား ဂြိုလ်တွေဘာတွေကိုလည်း သွားနိုင်ဖို့ ဖြစ်ချင်ဖြစ်လာမှာ" လို့ ထပ်ဖြည့်ပြောသေးတယ်။ ဧည့်သည်တွေကလည်း လပေါ် အာကာသယဉ် ဆိုက်တဲ့ သတင်းကား မကြာခင်မှာ မြင်းခြံကို ရန်ကုန်ကနေ ရောက်လာဖို့ရှိကြောင်း၊ အဲဒီအခါ မြင်းခြံရုပ်ရှင်ရုံကို သွားပြီး အတူတူကြည့်ကြဖို့လည်း တိုင်ပင်ကြတယ်။ အမေရိကန်အစိုးရက သူတို့လပေါ်ရောက်တဲ့ အကြောင်း တကမ္ဘာလုံး သိစေချင်လို့ အဲဒီသတင်းကားကို နိုင်ငံတိုင်းလိုလိုမှာ လိုက်ပြီးအခမဲ့ ဖြန့်ချီနေကြောင်း စတာတွေ လည်း ပြောကြသေးတယ်။
နောက်တရက် နှစ်ရက်နေတော့ ဖိုးသော်က "အမှုံ သိလား။ လပေါ်ကို လူတွေရောက်ကုန်ပြီတဲ့" လို့ လူကြီးတွေပြောတဲ့ ကိစ္စကို အမှုံ့ကို ပြန်ပြီး ပြောပြတယ်။ အဲတော့ အမှုံက အလန့်တကြားနဲ့ ဖိုးသော်ကို ဒီလိုပြန်ရှင်းတယ်။ "ဟဲ့ဟဲ့ အမလေး၊ ဖိုးသော် နင်တော့ တိထ္ထိဖြစ်တော့မှာပဲ။ လဆိုတာ လူမရောက်နိုင်တဲ့ အရပ်ဟဲ့။ ယူဇနာ တသိန်းလောက် ဝေးတယ်လို့ ရှေးလူကြီးတွေက ဆိုတယ်။ ပြီးတော့ လပေါ် လူတက်ဖို့ဆိုတာက လရဲ့အရွယ်က လှည်းဘီးဝိုင်းလောက်ပဲ ရှိတာ၊ ဘယ်လို လုပ်ပြီး လူတက်လို့ရမလဲ"။ အမှုံ့စကားကြောင့် ဖိုးသော်လည်း အူလည်လည် ဖြစ်သွားတယ်။ ဒါပေမယ့် အဖေ၊ အမေနဲ့ အိမ်လာတဲ့ ဧည့်သည်တွေ အားလုံးက လပေါ် လူရောက်ကုန်ပြီဆိုတာ ပြောထားတာပဲဟာ။ အမှုံက အဖေတို့ အမေတို့ထက် ပိုသိပါ့မလား၊ ပြီးတော့ စာလည်း တတ်တာမှ မဟုတ်တာလို့ ဖိုးသော်တွေးမိတယ်။ ဒါပေမယ့် အမှုံ့ကို ခံငြင်းဖို့ ဆိုတာကလည်း အသက်သုံးဆယ် အရွယ်လောက် လူကြီးကို ဖိုးသော်လို နှစ်တန်းကျောင်းသားက ဘယ်လို လုပ်ပြီး ချက်နဲ့လက်နဲ့ ခံငြင်း နိုင်ပါ့မလဲ။
ဒါပေမယ့် ဖိုးသော်က လျှော့တော့မလျှော့သေးဖူး။ "လအရွယ်က လှည်းဘီးဝိုင်းလောက်ပဲ ရှိတယ်လို့ အမှုံ့ကို ဘယ်သူပြောလဲ" ဆိုပြီး မေးတယ်။ အဲဒီတော့ အမှုံက "ငါပြောတာမဟုတ်ဖူး။ ဒို့ ရွာဦးကျောင်း ဆရာတော် ပြောတာ။ တရွာလုံး သိနေတဲ့ ဟာပဲ" ဆိုပြီး ဖိုးသော်ကို ရွာဦးကျောင်း ဆရာတော်နဲ့ ကိုင်ပေါက်လိုက်တယ်။ ဖိုးသော် အသံနဲနဲ တိတ်သွားတယ်။ ဒါပေမယ့် ဖိုးသော်က ထပ်ပြီး "အဖေတို့အမေတို့ ပြောတာက ဒီလိုအမှုံရဲ့၊ လကအဝေးကြီးမှာ ဆိုပေမယ့် ဒုံးပျံစီးပြီးသွားလို့ရတယ် ပြောတယ်ဗျ" လို့ ထပ်ကွန့်ပြန်တယ်။ "ဘယ်သူတွေ ဘာဘဲပြောပြော ချက်ခြင်း မယုံရဖူးလို့ ဆရာတော်က ပြောဖူးတယ်။ ကိုယ်ကိုယ်တိုင် ကြုံဖူး၊ မြင်ဖူး၊ ရောက်ဖူးမှ ယုံထိုက်တယ်လို့ ဆရာတော်က ဒို့တရွာလုံးကို ဆုံးမဖူးတယ် ဖိုးသော်ရဲ့၊ နင်ကိုယ်တိုင် ရောက်ဖူးလို့ ပြောရင် တော့ ငါကယုံမှာပေါ့" ဆိုပြီး အမှုံက နောက်ဆုံးမှာ ပိတ်ပြောလိုက်တယ်။ ဖိုးသော်ကတော့ ခေါင်းကုတ်နေရင်း အဖေတို့ အမေတို့ပဲ မှားသလား၊ အမှုံပဲ မှန်သလား ဆိုတာ မဝေခွဲနိုင်ဖူး ဖြစ်နေတာပေါ့။
အဲဒီနောက်ပိုင်း ဖိုးသော်ခမျာ ကျောင်းသွားလည်း ဒီစိတ်၊ ကစားနေလည်း ဒီလပေါ် လူရောက်တဲ့ စိတ်ကပဲ သူ့ကို လွှမ်းမိုးနေတယ်။ တရက်တော့ မနေနိုင်တော့ပဲ "အမှုံ လပေါ်လူရောက်တယ် ဆိုတာ တကယ်ဟုတ်တယ်တဲ့" ဆိုပြီး အမှုံဆင်ဆာ ပိတ်ထားတဲ့ ဇာတ်လမ်းကို ဆက်ရေးလိုက်တယ်။ အဲဒီတော့ အမှုံက "ဟင် နင့်ကို ဘယ်သူက ပြောလိုက် ပြန်ပလဲ" ဆိုပြီး စစ်ကြောပြန်ရော။ "ကျနော်တို့ အတန်းပိုင် ဆရာမကိုယ်တိုင်က ပြောတာ၊ ဟုတ်တယ်တဲ့"။ ဒီလောက်နဲ့တော့ ဘယ်ရမလဲ။ အမှုံက အမှုံပဲလေ ခေသူမှမဟုတ်တာ။ "ဖိုးသော် သေသေ ချာချာမှတ်နော် ငါပြောမယ်။ လပေါ်တို့ အာကာသထဲတို့ ဆိုတဲ့ ကိစ္စတွေဟာ ဒို့လူသားတွေရဲ့ အရေးအရာ မဟုတ်ဖူးတဲ့။ နတ်သိကြားတွေ၊ သူတော်စင်တွေ၊ ရဟန္တာတွေ တရားအားထုတ် ကျင်လည်တဲ့ အရပ်လို့ ဆိုတယ်။ လူသာမန်တွေနဲ့ မအပ်စပ်ဖူး၊ ရောက်ဖို့လည်း မလွယ်ဖူးလို့ ရှေးလူကြီးတွေကလည်း ပြောတယ်၊ ဆရာတော်ကလည်း အဲသလို ပြောတာပဲ၊ နင်တို့ အတန်းပိုင် ဆရာမက ဗုဒ္ဓဘာသာကော စစ်ကဲ့လားဟဲ့"ဆိုပြီး အနိုင်လည်းပိုင်း ဆရာလည်း လုပ်တဲ့လေသံနဲ့ ဖိုးသော် ထပ်တင်တဲ့ အဆိုကို ပယ်ချလိုက်တယ်။ ဒီတချီလည်း ဖိုးသော် အရေးနိမ့်ပြန်တယ်လို့ ဆိုရမှာပေါ့။ ဒါနဲ့ နောက်ဆုံးမှာ စစ်ကူများ ရမလားဆိုပြီး အမှုံက လပေါ်လူ ရောက်တာကို မယုံတဲ့အကြောင်း ဖိုးသော်က သူ့အဖေအမေတွေကို တိုင်ပြော ပြောတော့ မိဘတွေက တသောသော ရယ်မောပြီး ထားလိုက်ပါ ငါ့သားရယ် ဆိုပြီးသာ အဖြေပေးတယ်။ သူမိဘတွေ ဘာဖြစ်လို့ အဲသလို ရယ်ရတာလဲ ဆိုတာကို ဖိုးသော် နားမလည်နိုင်ပြန်ဖူး။
ဒါပေမယ့် နောက်ထပ် နှစ်လလောက်ကြာတော့ မထင်မှတ်တဲ့ အဖြစ်တခု ဖြစ်လာတယ်။ ဘာတုန်းဆိုတော့ အမှုံက လပေါ် လူရောက်တာကို ယုံသွားပြီ ဆိုတဲ့အကြောင်း ဖိုးသော်က သူ့ အဖေနဲ့ အမေကို သတင်းပို့ လိုက်ခြင်းပါပဲ။ သူ့မိဘတွေက ဘာကြောင့် အမှုံတယောက် လပေါ်လူရောက်တာကို ယုံလာရသလဲ ဆိုတာနဲ့ ပတ်သက်လို့ ဖိုးသော်ကို ထွေထွေထူးထူးတော့ မေးမနေပါဖူး။ အေးအေး အဲတာဆိုလဲ ကောင်းတာပေါ့ကွယ် ဆိုတာလောက်နဲ့ ပြီးသွားတယ်။
လပေါ် လူရောက်တာကို အမှုံ ယုံသွားရတဲ့ အကြောင်းက ဒီလို။ ထုံးစံအတိုင်း မောင်ကမ္ဘာ ကာတွန်းအသစ် ထွက်တော့ ဖိုးသော် ဝယ်လာတယ်။ အိမ်ကိုရောက်တော့ အမှုံ့ကို ခါတိုင်းလို အသံထွက်ပြီး ဖတ်ပြနေတယ် "စုံထောက် မောင်ကမ္ဘာသည် လပေါ်အထိ ဒုံးပျံစီးပြီး ထွက်ပြေးသွားသော ဂိုဏ်းခေါင်းဆောင် ဖူးမန်းချူးကို လိုက်ဖမ်းရန်အတွက် နောက်ထပ် ဒုံးပျံတစင်းပေါ် အမြန်ခုန် တက်လိုက်ပြီး စက်ကိုနှိုးလိုက်သည်"။ ဒီတော့ အမှုံက "ဟင် ဒီလိုဆိုရင် လပေါ် လူရောက်တယ်ဆိုတာ အမှန်ပေါ့နော" ဆိုပြီး ဖိုးသော်ကို မေးလိုက်တယ်။ "ဟုတ်တယ် အမှုံရဲ့။ ဖူးမန်းချူးက မတရားချမ်းသာထားတော့ အရေးကြုံရင် သုံးရအောင် သူ့ကိုယ်ပိုင် ဒုံးပျံတွေ ဘာတွေ ဝယ်ထားမှာပေါ့" လို့ ဖိုးသော်က ပညာရှိဂိုက်နဲ့ ရှင်းပြတယ်။ တဖက်မှာလည်း ဖိုးသော်ကို အမှုံက မောင်ကမ္ဘာကျွမ်းကျင်သူလို့ သတ်မှတ်ထားတာက တပိုင်း၊ ဖိုးသော် ဖတ်ပြမှ မောင်ကမ္ဘာဇာတ်လမ်းကို နားထောင် ရတာကလည်း တပိုင်းဆိုတော့ ကွက်တိဖြစ်သွားတာပေါ့။ ဒါပေမယ့် တကယ့်ဇာတ်လမ်း ထဲမှာ အဲတာက မပါပါဖူး။ ဖိုးသော်က တမင်ထွင်ပြီး ဖတ်ပြလိုက်တာ အမှုံက ယုံသွားတယ်။ ယုံဆို အမှုံက အသက်ကြီး ပေမယ့် သူ့ခမျာ စာမှမတတ်ရှာပဲ ဟာကိုး။
(နှစ်ပေါင်းလေးဆယ်ကျော်က အမှုံသို့ အမှတ်တရ)
၂၂ ရက်၊ ဇွန်လ၊ ၂ဝ၁၁ ခုနှစ်
Thank you for the post. I really hadablast.
Thanks..I really like it, makes me relax... :)